ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် « MMWeather Information BLOG
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အနောက်အလယ်ပိုင်းတွင် လေဖိအားနည်းဆဲလ် INVEST-98B စတင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိ
Leaveacomment MODEL-FORECAST, ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက်, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, မုန်တိုင်းသတင်း, လေဖိအားနည်းဆဲလ်, ကြိုတင်ကာကွယ်ပြင်ဆင်ခြင်း 15W, 98B, KALMAEGI, TYPHOON, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, တောင်တရုတ်ပင်လယ်, လေဖိအားနည်းဆဲလ် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းတွင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်မည့် အခြေအနေ ကြိုတင်ခန့်မှန်း-၃
Leaveacomment MODEL-FORECAST, ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက်, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, လေဖိအားနည်းဆဲလ်, လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်(ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ အရှေ့ဘက်)မှ မုန်တိုင်းများနှင့် မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေ
By mmweather.ygn, on August 6th, 2014%
ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း HALONG(11W) – ဖိလစ်ပိုင်အမည်(JOSE)သည် မြောက်-အရှေ့မြောက်အရပ်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားလျှက်ရှိပြီး၊ ကြာသပတေးနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဂျပန်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်းသို့ ဆက်လက်ဦးတည်ရွေ့လျားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ရှိအချိန်တွင် အဆင့်-၁ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအဆင့်အထိ အားလျော့သွားပြီး၊ သြဂုတ်လ ၇ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် အဆင့်-၂ တိုင်ဖွန်းတိုင်းအဖြစ်သို့ ပြန်လည် အားကောင်းလာပြီးမှ သြဂုတ်လ ၉ ရက် ညပိုင်းတွင် ဂျပန်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်းအား ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။ မုန်တိုင်း HALONG ၏ လက်ရှိ အရွယ်အစား အချင်း ၈၃၅ ကီလိုမီတာ(၅၁၈ မိုင်ခန့်) ရှိကြောင်း သိရပါသည်။
Typhoon HALONG (JOSE) has moved north-northeast during the past . . . → Read More: ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်(ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ အရှေ့ဘက်)မှ မုန်တိုင်းများနှင့် မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေ
Leaveacomment MODEL-FORECAST, မိုးလေဝသအခြေအနေ, မုန်တိုင်းသတင်း, ကြိုတင်ကာကွယ်ပြင်ဆင်ခြင်း 11W, HALONG, JOSE, ကပ္ပလီပင်လယ်, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်(ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ အရှေ့ဘက်)မှ မုန်တိုင်းများနှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်
By mmweather.ygn, on July 29th, 2014%
ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၂းဝဝ နာရီတွင် ရရှိသည့် GFS ကွန်ပျူတာမော်ဒယ် – Earth Application ကြိုတင် ခန့်မှန်းချက်အရ ဘင်္ဂလာပင်လယအော် မြောက်ပိုင်း၊ Pressure Altitude 850hPa မှ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းငယ်သည် အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ရွေ့လျားလျှက်ရှိကြောင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ အရှေ့ဘက် ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှ INVEST 96W နှင့် အပူပိုင်း မုန်တိုင်း 11W(HALONG)တို့သည်လည်း အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်တို့သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားလျှက်ရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။(ပုံ-၁)
ဇူလိုင် ၃ဝ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၂းဝဝ နာရီနောက်ပိုင်းတွင် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှ လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်းသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ သြရိသကမ်းခြေအား ဖြတ်ကျော်၍ ကုန်းတွင်းသို့ ရောက်ရှိသွားမည့် အခြေအနေတွေ့ရပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် အပူပိုင်းမုန်တိုင်း HALONG(11W)သည် ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး . . . → Read More: ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်(ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ အရှေ့ဘက်)မှ မုန်တိုင်းများနှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်
One comment ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, မိုးလေဝသအခြေအနေ, လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ကပ္ပလီပင်လယ်, ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ပိုင်း, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကုန်းတွင်းသို့ရွေ့လျားဝင်ရောက်သွားတော့မည့် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း
By mmweather.ygn, on July 21st, 2014%
ဒီနေ့ နေ့လည်ပိုင်းက စ ပြီး ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် မြောက်ပိုင်း၊ အိန္ဒိယနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ်က လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း အနောက်ဘက်(အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကုန်းတွင်းဘက်ကို တဖြည်းဖြည်း ရွေ့ပြီး ကျနော်တို့ ပင်လယ်ပြင်မှာ တဖြည်းဖြည်း ငြိမ်လာပါတော့မယ်လို့ GFS ကွန်ပျူတာမော်ဒယ် ကြိုတင် ခန့်မှန်းချက်တွေမှာ တွေ့ရပါတယ်။
မနက်ဖန် ဇူလိုင် ၂၂ ရက် မနက်ပိုင်းမှာတော့ အဲဒီ လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်းဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကုန်းတွင်းကို အတော်လေး ဝင်သွားပြီး ဇူလိုင် ၂၃ ရက်နေ့အထိ ကုန်းပေါ်မှာဘဲ ဆက်ပြီး တည်ရှိနေဦးမယ်လို့ တွေ့ရပါတယ်(ပုံ-၁)၊ တစ်ချိန်တည်းမှာ ထိုင်ဝမ်ကျွန်းနားကို ရောက်လာတဲ့ မုန်တိုင်း MATMO(10W) ကလဲ အဆင့်-၂ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအဆင့်ကို ရောက်လာပါမယ်၊ ထိုင်ဝမ်ကျွန်း မြောက်ဘက်အဖျား(တိုင်ပေမြို့အနီးမှ)ကပ်လျှက် ဖြတ်ကျော်တိုက်ခတ်ပြီး တရုတ်ပြည်မ . . . → Read More: အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကုန်းတွင်းသို့ရွေ့လျားဝင်ရောက်သွားတော့မည့် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း
Leaveacomment MODEL-FORECAST, မုန်တိုင်းသတင်း, လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း, ကြိုတင်ကာကွယ်ပြင်ဆင်ခြင်း 10W, MATMO, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းကို ကျော်ဖြတ်၍ တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ ရောက်ရှိလာမည့် မုန်တိုင်း RAMMASUN-09W
By mmweather.ygn, on July 13th, 2014%
RAMMASUN stillaweak Tropical Storm (TS) as it swiftly moves towards the west…expected to enter the Philippine Area of Responsibility (PAR) tonight. The initial . . . → Read More: ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းကို ကျော်ဖြတ်၍ တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ ရောက်ရှိလာမည့် မုန်တိုင်း RAMMASUN-09W
Leaveacomment MODEL-FORECAST, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, မုန်တိုင်းသတင်း, လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 09W, RAMMASUN, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, အရှေ့ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းတွင် လေဖိအားနည်းဆဲလ် INVEST 96B စတင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိ
Leaveacomment ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက်, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, လေဖိအားနည်းဆဲလ် 96B, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ် အရှေ့ပိုင်းမှ 99W နှင့် မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင် အခြေအနေ
Leaveacomment ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက်, လေတိုက်ခတ်မှုအခြေအနေ, လေဖိအားနည်းဆဲလ် 99W, ကပ္ပလီပင်လယ်, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, အရှေ့ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ် Older Entries »